လူစုလူဝေးလုပ်တဲ့ ဘာသာရေးဆရာ နှစ်ဦးကို သဘာဝဘေးအန္တရ...
20 พ.ค. 2563 - 23:30 น.
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေလို့ လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ တားမြစ်ထားတဲ့အချိန်မှာ လူစုလူဝေးနဲ့ ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့လို့ အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့ တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လား နဲ့ သင်းအုပ်ဆရာ တစ်ဦးကို မေလ ၂၀ ရက်နေ့ က တရားရုံးတွေမှာ ချုပ်ရက် ရမန် ယူခဲ့ပါတယ်။
တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားကို သဘာဝဘေးအန္တရယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ၂၅ နဲ့ မရမ်းကုန်းမြိုနယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လား ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ အမှုဖွင့်ခံရပြီး တစ်လကျော်အကြာ ရောဂါပျောက်ကင်းချိန်မှ တရားရုံးမှာ အမှု စတင်ရင်ဆိုင်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ လူစုလူဝေးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားဟော ဆရာစောဒေးဗစ်လား၊ ဦးဝေထွန်း၊ ဦးစောကွယ်ဝါး(သင်းအုပ်ဆရာ)နဲ့ အမှုတော်ဆောင်ဦးစောရေဂန်ဒီ တို့ကို သဘာဝဘေး အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနဲ့ အသီးသီး အမှုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်းက ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က ဘီဘီစီကို ပြော ခဲ့ပါတယ်
အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရဲလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့် အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ ဆက်လက်ချုပ်ထားဖို့ ချုပ်ရမန် ယူခဲ့တာလို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားသူကြီးဦးမိုးဆွေက ပြောပါတယ်။
တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လား အတွက် ချုပ်မိန့်ရမန်ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့အထိ ယူထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ ဟာ ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်တော့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အောက် ဒါမှမဟုတ် ငွေဒဏ် ကျခံရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားရဲ့ ဘာသာရေးစုဝေးပွဲကနေတစ်ဆင့် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၇၀ ခန့်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီထဲ က လူနာအမှတ် ၈၆ ကတော့ သေဆုံးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးကလည်း သဘာဝဘေးအန္တရယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေနဲ့ ချုပ်ရမန်ယူတဲ့ တင်ပြချက်ကို ဒီကနေ့ မေလ ၂၀ရက်နေ့ကနေ ဇွန်လ ၃ရက်နေ့အထိ ၁၅ရက်ကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။
ချုပ်ရက်ခွင့်ပြုချက်အပြီး တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လားကို အင်းစိန်ထောင်ကို ပို့ဆောင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။
တရား ဟောဆရာ စောဒေးဗစ်လားနဲ့ အတူဆုတောင်းပွဲကို တက်ခဲ့တဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ်က ဘာသာရေးဆရာ ဦးစောကွယ်ဝါးကိုလည်း ဒီကနေ့မှာပဲ အင်းစိန်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ပြီး ရမန်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ အထိ ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက် အင်းစိန်တရားရုံးကလည်း ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ လူစုလူဝေးလုပ်တဲ့ ဘာသာရေးဆရာ နှစ်ဦးကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ ချုပ်ရမန်ယူ